Famous Myanmar Muslims who had even improved the Myanmar history are now sadly called Kalars | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Is Daw Suu planning to delete “D” from NLD ?
Hate Speech »
Famous Myanmar Muslims who had even improved the Myanmar history are now sadly called Kalars
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးက အမျီုးသမီးဟာ မင်းသမီး ခင်သီတာထွန်းပါ။ ဒီပုံဟာ အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံး မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
KALAR GYI at the back was almost forgotten. Now DASSK is at the TOP, naturally MUST kick out the scaffolding (Nyan in Burmese) after finishing the pagoda.
That Kalar Gyi went to fetch DASSK with the car driven by another Kalar, MMNyein. Now only I found out (proudly) that they are my extended cousins or far relatives. Even if think that it is so far to call an extended relative or family, at least we all are brothers-in-Islam but nowadays called withaderogatory name Kalar.
Even his cousin, famous father of Myanmar western and tradition boxing (Let Whei’), Kyar Ba Nyein’s very important role in Myanmar sports history was partly deleted because he wasaMyanmar Muslim. See Lethwei
His son U Win Nyein wrote in my blog on December 17, 2009 …
I accidentally read about my father written in your blog. May I correctamistake.
My maternal grandmother Daw Aye Khin was the eldest sister of Daw Htwe, your grandpa’s wife. So my father was not the brother in law of U Pyaw. He was his niece’s (my mom Daw Kyi Kyi) husband. So he was U Pyaw’s nephew.
And he wrote again about Maung Thaw Ka in MMSY…
ရှိစေချင်တဲ့ ကျွန်တော့် ဦးလေး…BY ဝင်းငြိမ်း…ဆရာမောင်သော်ကက ကျွန်တော့်ဖခင် ကျားဘညိမ်းနဲ့ ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ တော်စပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဘိုး ဦးဖိုးမင်းနဲ့ သူ့အဖေ ဦးမှန်ကြီးတို့က ညီအစ်ကို အရင်းပါ။ အဖေနဲ့ ဆရာမောင်သော်ကတို့က တစ်ဝမ်းကွဲညီအစ်ကို ဆိုပေမယ့် အနေနီးတာကြောင့် ညီအစ်ကိုအရင်းများလို တွယ်တာ ကြပါတယ်။ http://news.mmsy.info/news/3576
Aung San Suu Kyi appears for the first time on the Burmese political scene, addressing an audience at Rangoon General Hospital while the country is in the grip of martial law.
“It was Daw Suu’s first appearance in public and we thought she wouldn’t be able to speak Burmese fluently because she had spent years in England,” said Moe Thu,awell-known writer and former NLD executive committee member. Suu Kyi had surprised them all by her fluency in the Burmese language, he recalled.
“Kyar” Ba Nyein (Burmese: ကြား ဘငွိမျး [tɕá ba̰ ɲéɪɴ]; 23 November 1923 – 8 July 1979) was the Burmese boxer who participated in boxing at the 1952 Summer Olympics and wasapioneer in modernizing the Lethwei, or Burmese style of traditional boxing. Ba Nyein started boxing at the age of 13 and fought in about 50 matches over 20 years until retiring from fighting at the age of 33
Che Rry ဘေးက ဦးလေးကြီးကကော???
Ven Kovida နောက်က ဆေးရုံကြီးထင်တယ်နော် သူနာပြူတွေလားမသိဘူး
Htin Lynn May Ei အဲလူကြီးက ဗိုလ်မူးဘသော် ခေါ် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာမောင်သော်က
Than Lwa နာမည်ကျော်..စာရေးဆရာကြီး..မောင်သော်က..ဟာအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကနေ..xxx.အကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ ကွယ်လွန်တယ်..
Smile Pyone U THAW KA
Movie Crazies ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံရေး ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာပါ။
Ye Myo Hein မောင်သော်ကစာ နှလုံးဌာနမှာကွယ်လွန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်းစိန်အကျဉ်း ထောင်တိုက်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုလူးလိမ့်ခံစားရင်းကွယ် လွန်သွားတာပါ။ သေတော့မှ ထောင်မှုးတိုက်ထောင်မှုးအောင်ခိုင်က ကျောပိုးပြီး တိုက်ကိုသယ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။
Aung Kaung He’saMaster Mind.
Aung Thu sayar maung thaw ka gol lae thadi ya del,,
Yawswar Power ကျုပ်သိပ်လေးစားရတဲ့ အလေးပြုရတဲ့ ဆရာဦးသော်က(ခ)ဗိုလ်မှုးဘသော်
Tin Maung Win ဆရာကြီးမောင်သော်ကပုံမြင်ရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရင်းသေဆုံးသွားရတဲ့အကြောင်းဖတ်ဖူးတာပြန်သတိရပြီးစိတ်ထိခိုက်ရတယ်….
Phyo Zin Its khin thida tun who is next to aunty su..
Kyaw Htay ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးက အမျီုးသမီးဟာ မင်းသမီး ဒေါ်ခင်သီတာထွန်းပါ။ သူတောင် ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။
Sally Mya-Win ဘေးက ဦးလေးကြီးက စါရေးဆရာမောင်သော်က (ဗိုလ်မှူးဟောင်း)ပါ ထောင်ထဲမှာပဲ ဆုံးပါးသွားရှာပါတယ်။
Sally Mya-Win ဘေးက အမျိုးသမီးကတော့ ဒါရိုက်တာ ထွန်းမြင့်ထွန်း ရဲ.သမီး မင်းသမီး ခင်သီတာထွန်း ပါ။
Zaw Than he isaMuslem.[ U Thaw Ka R I P .]
Nga Thant ‎… behind her .. his name was U Thaw Ka , Navy officer ppl call Bo Hmue Thaw ka 100% against to regime, one of our Hero too ..
Kyaw Soe Hein ဗိုလ်မှူးဘသော်
Paing Lay ဘာတွေပြောသွားလဲသိချင်တယ်ဗျာ
Guiding Stars Burma ဘိုးသော်ကဟာ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး မရောက်ခင် အင်းစိန် ၂ တိုက်တွင်းမှာကတည်းက အသက်မရှိတော့ပါ။ ကြိုးတိုက် ခေါ် ၂ တိုက် အခန်း နံပါတ် ၂၇ မှာ သွေးတိုးပြီး ဦးဏှောက်ကြောပြတ်သွားတာပါ။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိပ်ကို သိပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့် ဒါတွေကို ဘယ်လို ပြန်ဖြေရှင်းလို့ ရတော့မလဲလို့ မေးပါရစေ ။
Htun Htun Oo သတိယပါတယ် အဘသော်(ကျနော်ရုံးထွက်စဉ်၆တိုက်မှာ ၁၉၈၉တုံးက)
Ko Gyi author of “Battle ship 103”, mg. Tawka
Thant Zaw ဒေါ်ခင်သီတာထွန်းမှန်ပါတယ်….ဘဘသော်ပါတဲ့..ပုံနဲ့…အမေစုရဲ့ရှားပါးပုံလေးတွေ့ရလို့ဝမ်းသာရပါတယ်
Gyi Aung ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်.ခင်သီတာထွန်းရုပ်ရှင်လောက.ကပျောက်သွားတာ.ခင်ညွန့်လက်ချက်ပဲ..
Ei Thuzar Oo ၀ဋ်ဆိုတာ ပြန်လည်တတ်ပါတယ်။
Tags: Aung San Suu Kyi, Burma, Burmese language, Ko Gyi, Kyar Ba Nyein, Muslim, Myanmar, Win Maung (boxer)
This entry was posted on July 10, 2012 at 11:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.